7 Best Online Welding Courses | Yemahara & Inobhadharwa 2022
7 Best Online Welding Courses | Yemahara & Inobhadharwa
Dai 10, 2022 Justice Regis
Iyi blog post inotarisa pane akanakisa epamhepo welding makosi anogona kuwanikwa painternet, inopa hupfumi hweruzivo kune avo vadzidzi vari kuvhima online welding makosi ayo ese emahara uye anobhadharwa.
Pano isu tichatarisa pane izvo welding inosanganisirwa kana vanhu vachigona kudzidza weld online, mabhenefiti emahara emahara welding makosi, uye rumwe ruzivo rwunovandudza manzwisisiro edu eakanakisa epamhepo welding makosi ese ari emahara uye anobhadharwa.
Indaneti idziva rezviwanikwa rinogona kusimudzira ipapo pfungwa dzemunhu wese akatarisa uye akashinga zvakakwana kuti atsvage nemumvura dzayo, uyezve pane isu, vanhu vakaita sesu vanokutsvagira iwe vachikupa zviwanikwa zvinofema pfungwa zvakadai internet unogona kuwana iwo akanakisa makosi ekushambadzira anoita kuti iwe ubvumidzwe, varipo vane hunyanzvi hwekutora firimu uye kugona kwedu kukuitirai zvinhu kunoita kuti ndiratidze makosi akanakisa evagadziri vemafirimu anowanikwa online evadzidzi.
Vamwe vadzidzi vanoda kuenderera mberi nedzidzo yavo uye vari kushamisika kuti ndeipi nhanho inotevera, zvakanaka ndakufukidzirai sezvandinokupai iyo FAFSA inogamuchira makoreji epamhepo ari akanakisa. Uye pakupedzisira, ndine emahara application kudzidza mapuratifomu ari akanakisa online.
Naizvozvo, chero zvipi zvaunofarira, une chimwe chinhu chinogutsa kuda kwako ruzivo, uye saiti ino, kunyanya, ine chimwe chinhu chinobatsira panyota yako apo tinopa izvo zvinodiwa newe pakudzvanya bhatani.
Nezvo zvataurwa, isu zvino tinopindura mubvunzo;
Chii chinonzi Welding?
Ndinogona kudzidza Welding Online?
Zvakanakira Kudzidza Welding Pamhepo
8 Best Online Welding Courses | Yemahara & Inobhadharwa
1. Hobart Institute of Welding Technology (Yabhadharwa)
2. Davis Technical College (Yakabhadharwa)
3. Ashland Community Technical College (Yabhadharwa)
4. Tulsa Welding Chikoro (Yakabhadharwa)
5. Elite Welding (Yabhadharwa)
6. Advanced Welding Institute (Yabhadharwa)
7. American Welding Society (Yabhadharwa)
8. Basics of Welding & Joining Technologies - Alison (Mahara)
Kusanganiswa kwezvikamu zviviri zvesimbi zvakasiyana kuburikidza nekushandiswa kwekupisa kunoiswa panzvimbo yazvo kusvika pakunyunguduka uchishandisa blowpipe, electric arc, kana chero imwe nzira, nekuzvibatanidza nekushandiswa kwekudzvanyirira kana kuzviisa pasi pechitsiko chesando. , nezvimwewo.
Welding inzira yekugadzira inosanganisira kusanganisa zvidimbu zviviri kana kupfuura uchishandisa kupisa, kudzvanywa, kana zvese zviri zviviri kugadzira chinongedzo apo zvikamu zvinotonhorera. Welding inowanzobatanidzwa nesimbi uye thermoplastics, asi inogona kushandiswa pahuni. A weldment izwi remusanganiswa wakasungwa zvizere.
Ehe, zvinogoneka kudzidza zvese zviri pamhepo mazuva ano, sezvo internet ichiramba ichikura sedura reruzivo rwevanhu uye hunyanzvi, uye welding haina kumbosiyana sezvo paine online welding makosi anowanikwa kubva chero chinzvimbo pasi pano. chero uchikwanisa kubatana neinternet nemudziyo wakakodzera.
Kutanga, iyo internet ndeye 24/7 sosi yemagetsi isingarare uye mabhenefiti akakura sezvo online welding makosi anogona kuwanikwa nekudzidzwa chero nguva yezuva.
Kune zvakare mukana wakawedzerwa wekuva nefukidziro yepasirese; online welding makosi anogona kuwanikwa kubva chero nzvimbo yepasi pane merit yekuti une zvishandiso uye mapoinzi ekuwana internet.
Zvakare, iyo online welding makosi anogona kudzokororwa uye kudzidziswazve kugadzirisa kana kuve nechokwadi chekuti mapoinzi ese akafukidzwa uye hapana chaunopotsa mukuita kwako kudzidza.
Zvinokurudzirwa kuti avo vasina nguva yekubuda kuti vazvidzidze voga kubva kuchikoro chehunyanzvi kana musangano, shandisa imwe nzira iri nyore inova hombe resource powerhouse inozivikanwa seinternet nekushanyira chero epa online welding makosi uye. nyatso dzidza uye dzidza sezvo ruzivo rwuri kupfuudzwa pasi.
Kuti izvi zviitike, yave nguva yekuti isu titarise makosi epamhepo welding andatibikira nhasi. Iwo 8 akanakisa epamhepo welding makosi akaita sezita iro rakanakisa online welding makosi anogona kuwanikwa painternet muna 2022, izvi zvinotiudza izvo makosi acho anosanganisira uye chii chingatarisirwa kubva kwavari.
Zvakanaka, saka tauya kuchikamu chino patiri kutarisa nezve 8 akanakisa epamhepo welding makosi, tariro yangu tiri kukupa iwe makosi anokukwezva iwe zvakakwana kuti unyore kune imwe yadzo.
Pasina kutambisa nguva yako, hechinoi;
Nemutengo wakaderera, nzira pfupi yedzidzo, uye zvirongwa zvizere zvekuvaka, kugadzira, uye mamwe ekupinda-chikamu basa, Hobart Institute of Welding Technology ine nhoroondo refu yekubatsira vadzidzi kuti vave vanokwanisa welder.
Hobart Institute of Welding Technology inopa 24-vhiki welding curriculum inodzidzisa vadzidzi zvese zvavanoda kuziva kuti vatange basa iri. Chikoro chinongodzidzisa welding, zvichivabvumira kuti vatarise pakupa nyanzvi dzepamusoro-soro nemirayiridzo kubva kuvatungamiriri veindasitiri vane ruzivo.
Hobart's welding certification makirasi anodhura $11,700, iri pakati kudzikisa mutengo werudzi urwu rwekudzidziswa. Iwo makirasi anoitirwa muTroy, Ohio, uye anosanganisira maoko-pane rairo uye kudzidziswa kweindasitiri-yakasimbiswa nyanzvi.
Vadzidzi vanogona kusarudza pakati peyakagadzirwa welding curriculum uye yakarongeka uye pombi welding chirongwa. Welding tekinoroji, kuverenga kweblueprint, shielded metal arc welding, uye flux-cored arc welding ingori mishoma yemisoro yakafukidzwa.
Imwe bhenefiti yakakosha yechirongwa ichi rubatsiro rwepashure pekosi. Vadzidzi vanogona kuwana rubatsiro rwekutsvaga mabasa munharaunda yavo. Sekutaura kwechikoro ichi, vadzidzi vanodarika zviuru zana vakapedza zvidzidzo zvavo, vazhinji vavo vachishandira mabhizinesi eFortune mazana mashanu.
Davis Technical College inopa yakanyanya hupfumi welding setifiketi chirongwa ichiri kupa yemakwikwi edzidzo dzimwe nzira, rubatsiro rwemari, uye maturusi ekuisa basa.
Iyo welding tekinoroji kosi kuDavis Technical College inotora mwedzi gumi neimwe uye inogadzirira vadzidzi mabasa akasiyana siyana, anosanganisira flux core arc welding, plasma yekucheka, uye spray arc welding. Ndiyo zvakare chirongwa chakachipa, pamadhora mashanu,11.
Davis Technical College inogadzirira vadzidzi veAmerican Welding Society certification vachishandisa yekucheka-kumucheto welding midziyo uye maoko-pakuraira. Vadzidzi vanofanira kupedza maawa e1000 e-mu-munhu purogiramu yekuraira. Muvhuro kusvika Chishanu, nemakirasi anowanikwa mukati mezuva uye mamwe manheru, kudzidziswa kunopedzwa.
Vadzidzi veDavis Technical College havafanirwe kugutsa chero zvinodiwa. Pane kudaro, chirongwa chakavhurika kuvadzidzi vechikoro chesekondari uye vanhu vakapedza diploma rechikoro chepamusoro kana zvakaenzana. Vadzidzi vanopedza chirongwa vane 87 muzana yekuisa chiyero, maererano nesangano.
Nekuti inopa dhigirii uye zvitupa zvirongwa mune dzakasiyana siyana dzidziso, Ashland Nharaunda neTechnical College's welding certification dzakakodzera vadzidzi vari kutsvaga kuenderera mberi dzidzo.
Vadzidzi vanofarira welding vanogona kutsvaga akasiyana certification kuAshland Community neTechnical College, kusanganisira welder mubatsiri, gasi welder, uye arc cutter.
Zvitupa zvepamberi, senge pombi welder uye yekugadzira mutsara welder, zviripo zvakare. Vadzidzi vanogona zvakare kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo uye kuwana dhigirii rakazara remubatanidzwa, izvo zvinotora makore maviri kuti vapedze.
Kunyangwe iyo kharikhulamu ichidhura $24,625, vadzidzi vanokwanisa kuwana mahara tuition kuburikidza neBasa Ready Scholarship Chirongwa, icho chinopa rubatsiro rwemari kuvadzidzi vanokwanisa.
Kunyange chirongwa ichi chichingopihwa munhu, vadzidzi vane sarudzo yekudzidza mukati mezuva rose kana manheru, zvichivabvumira kuti vaenderere mberi vachishanda vachigamuchira magwaro avo.
Vanopedza kudzidza vanogona kushanda mumaindasitiri akasiyana, sekureva kweAshland Community neTechnical College, kusanganisira mabasa ekupinda-chikamu mukugadzira, ironworking, pombi-fitting, uye boiler-kugadzira. Vadzidzi vari kutsvaga rubatsiro rwekuiswa basa vanogonawo kuwana rubatsiro kubva kuchikoro.
Vadzidzi vanogona kudzidza kuTulsa Welding Chikoro mune imwe yenzvimbo nhatu: Tulsa, Oklahoma, Jacksonville, Florida, kana Houston, Texas. Makosi anopihwa mukati mezuva, husiku, uye pakupera kwevhiki, zvichibvumira kushanduka kukuru kwekudzidza. Dzidzo inopedzwa mukati memwedzi ingangoita minomwe, zvichiita kuti vadzidzi vapinde munzvimbo yebasa nekukasira.
Chirongwa cheSitifiketi cheTulsa Welding Chikoro chinoshandisa nzira dzazvino uye nemaoko-pakudzidza kudzidzisa vadzidzi zvimiro zvewelding, pombi welding, uye flux core welding. Mushure mekupedza kudzidza, vadzidzi vanenge vakagadzirira kushanda muchiuto, indasitiri, ndege, ndege, kana kuvaka ngarava. Iko kudzidziswa kunodhura $20,465 yedzidzo.
Chikoro cheTulsa Welding hachipi masevhisi ekuisa basa mubhodhi rose, asi chinobatsira vadzidzi nebvunzurudzo dzebasa uye bvunzo dzeweld kuti dzivabatsire kuzadzisa zvitupa zvewelding. Vadzidzi vanobatana nevadzidzisi kuona kuti vakagadzirira bvunzo.
Elite Welding Academy's welding certification curriculum yakatarisana nebasa, ine vadzidzisi vane ruzivo uye akashongedzerwa zvizere matumba ewelding. Varairidzi uye zvirongwa zvekubatsira mari zvinopa rubatsiro rwenguva dzose kuvadzidzi.
Elite Welding Academy inopawo rubatsiro rwemari kubatsira vazhinji vanopinda muchirongwa ichi, kunyangwe mutengo wacho uri wepamusoro watakaona pamadhora mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemakumi manomwe nenomwe.
Dzidzo yacho inotora mwedzi minomwe uye inonyatsokodzera vadzidzi kuti vawane zvitupa uye basa muindasitiri iyi. Unyanzvi hwekubvunzurudza basa uye rubatsiro mukuziva basa rakavhurika mudunhu iri pakati pemabasa ebasa aripo.
Icho chokwadi chekuti inongowanikwa chete se-mu-munhu chirongwa chinhu chikuru chinokanganisa.
Vadzidzi vachapedza chiuru chemaawa echikwereti chekuraira vachishandisa indasitiri-yakajairwa uye yazvino midziyo uye kudzidziswa pasi pekurudziro yeAmerican Welding Society neAmerican Society of Mechanical Engineers.
Chikoro ichi zvakare chinotevera National Council yeKuvaka Dzidzo uye Tsvagiridzo's welding maitiro ezvirongwa zvine chekuita nekuvaka.
Vadzidzi vanopedza Advanced Welding Institute's welding certification chirongwa vane nyore kuwana mabasa ekuisa basa, maoko-pakudzidziswa, uye pa-kuda kuraira.
Iyo Advanced Welding Institute inopa gumi nemashanu-masvondo ekumisikidza welding curriculum yakagadzirirwa kudzidzisa vadzidzi machinjiro emapureti mune akasiyana maindasitiri ekushandisa. Vadzidzi vanowana hunyanzvi mukugadzira, kugadzira, uye kuvaka kwemabasa ekupinda-chikamu. Shielded simbi, gasi simbi, uye gasi tungsten arc welding zviri pakati pemakosi aripo.
Mushure mekupedza kudzidza, iyo institution inopa masevhisi ekuisa basa, ine 87 muzana yehuwandu hwekuiswa kwebasa. Advanced Welding Institute inobatsira vadzidzi kugadzirira mabasa avo nekupa kutangazve kunyora uye hunyanzvi hwekubvunzurudza.
Chikoro ichi chinotiwo chine mwero wakaderera wevadzidzi kusvika kumudzidzisi, izvo zvinoti zvichabatsira vana kugadzirira mamiriro ezvinhu chaiwo. Vadzidzi vanonyoreswa nguva yakazara uye vanopedza maawa masere pazuva vari muchitoro chewelding vachikudza hunyanzvi hwavo.
Dzidzo inodhura $21,300, zvisinei, panogona kunge paine sarudzo dzekubatsira mari dziripo. Kunyangwe chirongwa ichi chichingo wanikwa mumunhu muVermont neWisconsin, chinopa kumwe kunonyanya kudiwa kudzidziswa, zvichiita kuti zvive zvakakosha kufunga.
Chimwe chezvikoro zvemumunda zvinopa chero fomu yewelding certificate chirongwa pamhepo iAmerican Welding Society. Kunyangwe iyo curriculum yakaganhurirwa, inopa inodhura-inoshanda uye yepamberi basa rimwe.
Nekuti hunyanzvi hwemaoko-pane hunyanzvi hunodiwa, makosi mazhinji ewelding anoitwa mumunhu. Kune vanhu vane basic welding certification vanoda kuve Certified Welding Inspectors, iyo American Welding Society inopa kirasi-masvondo masere. Iyi idzidzo yakaderera-mutengo inosanganisira ese seminari chaiyo uye seminar ine bvunzo bundle yemadhora zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mana.
Ichi chirongwa chakanakira vanhu vakatoshanda sevelder uye vanoshuvira kufambisira mberi mabasa avo vachiri kushanda. Vadzidzi vanozodzidza maitirwo ekuongorora kwekuona pamwe nehunyanzvi hwekudzidzira maindasitiri, uye vanozowana mukana wekushandisa kune inopindirana nemirayiridzo inounzwa kwemavhiki mazhinji muzvikamu zvemaawa maviri zuva rega rega.
Kosi inopihwa neAmerican Welding Society haisi yevanotanga. Pane kudaro, inopa vadzidzi mukana wekuwedzera sarudzo dzavo dzehunyanzvi.
Iyi yemahara online kosi inotsanangura welding fizikisi uye inoratidza mashandisiro ekushandisa welding nekujoinha matekinoroji.
Iyi kosi inokudzidzisa iwe zvakakosha zvewelding uye kujoinha. Isu tinotarisa kuti majoini akasiyana akaiswa sei, pamwe nemaitiro ekushongedza uye maitiro. Iyo mechanics ekunama uye brazing inozokurukurwa. Soldering, adhesive bonding, uye simbi kuchinjisa muwelding zvakafukidzwawo mukosi.
Makosi akati wandei epa online welding ekudzidziswa aripo pari zvino kuvadzidzi nenyanzvi zvakafanana, nepo mamwe ari ega, mamwe anomira kunze kwevamwe seHobart Institute of Welding Technology iyo inopa chirongwa chinodhura chinoita kuti vadzidzi vapinde mumunda nekukurumidza.
Welding ihunyanzvi hwakangofanana nehunyanzvi hwehunyanzvi uye vanofarira kuve vakanyanya mundima iyi vanofanirwa kudzidza kubva kuna masters, seavo vakaonekwa. Usarega izvi zvichipfuura usina kuita chisarudzo chakasimba mukuzvinatsiridza uye kuchengetedza ramangwana rako.
Rondedzero Yemayunivhesiti Akanakisa muSingapore eVadzidzi Venyika
10 mayunivhesiti akanakisa ehukama hwepasirese
19 Yakanakisa Nharaunda Makoji muTexas
6 Zvikoro Zvakanakisa ZveCulinary MuCalifornia | Fees & Details
15 Zvakanakisa ZveMotokari Injiniya Dhigirii Zvirongwa & Zvikoro
7 Akanyanya Mahara Online Zumba Makirasi
Zvemukati Munyori at Study Abroad Nations | Ona Zvimwe Zvinyorwa Zvangu
Regis munyori ane rudo rwekutungamira chizvarwa chechidiki mukuita sarudzo dzakanaka dzedzidzo. Akabatana neSAN mukutanga kwa2022 kuti tibatane nechikwata chedu chevagadziri vezvinhu zvinoshamisa kuti vape mhinduro kumibvunzo yakati wandei inobvunzwa nezviuru zvevadzidzi-vaverengi.
Anodawo nhabvu, mitambo yemavhidhiyo, uye mafirimu.
8 Zvikoro Zvakanakisa ZveArt muNew Jersey
8 Zvikoro Zvakanakisa ZveArt muFrance
9 Zvikoro Zvakanakisa ZveArt muArizona
10 Zvikoro Zvakanakisisa zveArt muPhiladelphia
Previous Post:10 Best Online Dzidzo dzeGadheni | Yemahara & Inobhadharwa
Next Post:Yemahara Pamhepo Kuchengeta Vana Makosi ane Zvitupa